- मौसम परिर्वतन, काठमाडौंको धुँलो र जनस्वास्थ्य
मौसम परिर्वतन, काठमाडौंको धुँलो र जनस्वास्थ्य
काठमाडौं: देशभर चैत्र महिना पछि मौसम प्रतिकुल हुन सकेको छैन । छिनमै पानि पर्ने, आकाश धुम्म हुने र छिनमै घाम लाग्ने गरेको छ । आकास पूर्ण रुपमा खुल्न नसकेको धेरै लामो समय भैसक्यो मौसम अनुसार गर्मी हुनुपर्नेमा त्यो छैन । घाम मधुरो छ । धुलेको छोपेको छ ।
देशकै राजधानी काठमाडौंमा पनि मौसम अनुकुलको प्रभाव पर्न सकेको छैन । दिनभर जसो धुम्म हुने र तातो हावा मात्र चल्ले गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ । महाशाखाले काठमाडौंमा बितेका वर्षमा भन्दा यस पटक मौसमले आफ्नो अनुकुलता देखाउन नसकेको र धुँवा धुँलोले धुम्मिएको जनाएको छ ।
समय अनुकुल परिर्वतन नभएको मौसम र यसले मानव स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने चिकित्सकले बताएका छन ।
। उनीहरुले यस्तो मौसमका कारण मानव स्वास्थ्यमा धेरै नै समस्या निम्ताउन सक्ने बताएका छन् । विश्व बैंकको तथ्यांकले त नेपालमा बर्सेनी २२ हजार जनाको मृत्यु वायु प्रदुषणका कारण नै हुने बताएको छ ।
वातावरण विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा हालको वायु प्रदुषण अवस्था मापदण्ड भन्दा करिब ४ गुणा बढि छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौंबासीको स्वास्थ्यमा कस्तो असर देखिएला यस प्रति सबैको चासो पुग्नु आवश्यक छ ।
एउटा मानिसले एक दिनमा औसत २० हजार पटक श्वास लिने गर्दछ । २० हजार पटक श्वास लिईरहदाँ मानिसले ३५ पाउण्ड वायु प्रयोग गर्ने गर्छ । यतिका मात्रामा प्रयोग हुने वायु नै स्वच्छ भएन भने मानिसको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने कुरै भएन ।
काठमाडौंमा सडक बिस्तार चलिरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछ्याउने काम धमाधम गरिरहेको छ । केही ठाउँमा ढल विछ्याउने काम पनि चलिरहेको छ । रिङ्गरोड विस्तार, थानकोट कलंकी सडक, रिङ्गरोड बाहिर र भित्रका अधिकांस ठाउँमा सडक बिस्तारको क्रम चलिरहेको छ । रिंगरोड, भित्री मुख्य सडक लगायत सहायक सडक र सडकको पेटी भत्काउने काम पनि दिनरात चली नै रहेको छ । यसले गर्दा पनि काठमाडौं उपत्यकामा मौसम सफा देखिन सकेको छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने गाडीले उत्पादन गरेको धुवाँ, विकास निर्माणका कार्यबाट उत्पादन भैरहेको धुँलो, फोहोर र कृषिजन्य पदार्थ जलाउदाँ निस्कने धुवाँ, ईटा भट्टाबाट निस्कने धुवाँ तथा पछिल्लो मौसमी अवस्थाले जनताको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर परेको देखिन्छ । मौसम प्रतिकुल हुन नसक्नु र धुँवा धुँलोको कारण मुटु रोग सम्बन्धी समस्या, झाडा पखाला र निमोनियाको समस्या, श्वास प्रश्वासको दिर्घ रोग अर्थात दमको समस्या, एच्. आई. भि/एड्स र क्षय रोग, क्यान्सर रोग जस्ता भयानक रोगहरुले आक्रमण गर्न सक्दछ ।
काठमाडौंको धुँलो र मौसममा आएको परिर्वतन बाट जोगिन निम्न उपाएहरु अपनाउन सकिन्छ ।
-सकभर अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाहिर ननिस्कने
-उच्चगुणस्तरको मास्कको प्रयोग गर्ने
-घरमा दैनिक रुपमा भ्याकुम प्रयोग गर्ने
-विहान र बेलुका मात्र हिड्ने, धेरै सवारी साधन गुड्ने ठाउँमा नहिड्ने, प्रदुषण बढि भएको अवस्थामा घर भित्रै व्यायाम गर्ने
-घरको झ्याल प्रदुषण कम भएको दिनमा मात्र खोली स्वच्छ हावा भित्र आउन दिने ।